Posted by မေဓာဝီ at 12:57 PM
အဲဒါက အပြည့် မမှန်ဘူးအမ။ ဟိုတလောက အသည်း ခင်မောင်ဝင်းပြောသွားတာပါ ကုလားသွေးစပ်သူဆိုရင် ဘီရောဂါဖြစ်ဖို့ အရမ်းနည်းပါးပါတယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် တရုတ်သွေးပါရင်တော့ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်ဖို့ သေချာနေပါပြီတဲ့။ တစ်ခါတစ်လေလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ခံအားနဲ့ ဆိုင်တယ် ထင်တယ် အမရဲ့။ :)
ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကြောက်ကိုကြောက်နေမိတာ၊ ကိုယ့်အနားမှာ အဲဒီလိုမျိုးမဆင်မခြင်လာလုပ်ရင် အလွန်မုန်း။
တခု မရှင်းတာက ရောဂါနဲ့ ကုလားသွေး တရုတ်သွေး ဘယ်လိုများဆက်စပ်မှုရှိလဲဆိုတာ နားမလည်ဘူး။ ရောဂါတွေဟာလဲ အသားရောင်ခွဲခြားမှုရှိတာမျိုးများလား .. ။
It's not the skin color Ma Maydar, it's the gene and races (well, skin color depends on the races). Some races are adaptative or immune to some deseases and viruses-bacterias. Cancers, heart deseases, diabetes etc are all subject to that. That is why some ppl smoke cigarettes all their lives but never get lung cancer but some get the deseases very easily or inashort time.
Also depends on your defense system at the time of contact to Hepatatis A, B, C s or even flu viruses... if you sleep well and areatough person, you won't get the flu from those sneezings.. easily but if you are weak at the moment (like in the middle of an exam).. then it is very easy for you to catch the flu..
But I do agree with what you are talking about. Sneezing infront of other ppl's face is very in-considerate and regarded as rude by many. I don't take to to hard but when someone sneeze in front of me, I try to avoid it somehow like you do... :)
hehehe... is my toungue is too long now?
သြော် .. အဲလိုလား .. ရှင်းပြတာကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်နော်။
လျှာရှည်တယ်လို့လဲ မယူဆပါဘူး။ မသိသေးတာကိုပြောပြတာပဲလေ။
ကျမကပဲ တော်တော်အကဲဆတ်နေမိလားမသိဘူး။ တခါတလေ ဘတ်စ်ကားစီးရင် တယောက်ယောက်ထသွားလို့ ထိုင်ခုံနေရာရရင်တောင် ချက်ချင်းမထိုင်ပါဘူး။ အဲဒီဖင်ထိုင်ခုံက ပူနေရင် ကိုယ်ထိုင်ရတာ စိတ်မသန့်လို့ပါ။ ကိုယ်ချက်ချင်းမထိုင်လို့ တခြားလူဝင်ထိုင်ချင်လဲထိုင်တော့ ဆိုပြီး မတ်တပ်သာ ရပ်စီးခဲ့ရပေါင်း များလှပေါ့။
မမေလိုစိတ်သာရှိရင်တော့ ညလေးရုံးသွားတိုင်း မတ်တပ်ရပ်စီးနေရတော့မယ်ထင်ပါ့ ဟီးးးး အလုပ်ကဝေးတယ်လေ ဘတ်စ်ကားဂိတ်ကစောင့်စီးရင်တောင် တစ်ခါတစ်လေ ထိုင်ခုံမရတတ်ဘူး ထိုင်ခုံလွတ်ရင်လဲ လုရတော့တာပဲ ဖင်ပူတာတွေမပူတာတွေ ရောဂါတွေဘာတွေ မစဉ်းစားအားဘူး ကိုယ်သက်သာဖို့အရေးကြီးတယ်လေ ရုံးရောက်ရင် အလုပ်ကလုပ်ရဦးမှာ ပြီးတော့ ကားပေါ်မှာ နှာချေတဲ့သူတွေရှိရင် ညလေးလဲ အားမနာဘူး နှာခေါင်းပိတ်ထားလိုက်တာပဲ ဒါတော့ရွံတယ်၊ ကိုယ်လဲ ချေချင်ရင်တောင် အောင့်ထားတတ်တယ်၊ နှာခေါင်းပိတ်ပြီး ပါးစပ်ပါတင်းတင်းစေ့လိုက်တော့ နှာချေလဲ အသံတိုးပြီး ဘာရောဂါမှ အပြင်မထွက်တော့ဘူးလို့ ခံစားရတယ်၊ ကိုယ်လဲ သူများစီက အကူးမခံချင်သလို ကိုယ့်မှာရှိနေရင်လဲ မကူးအောင်ပေါ့၊ လူမရှိရင်တော့ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ချေပါတယ်။ :P
1/21/2007 5:02 AM